ရော်ဒရီဂို ဒူတာတေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ရော်ဒရီဂို ဒူတာတေး (အင်္ဂလိပ်: Rodrigo Roa Duterte (/duːˈtɜːrtə/; Tagalog: [roˈdɾigo dʊˈtɛrtɛ]) သည် ဒိုင်ဂွန် သို့မဟုတ် ရော်ဒီဟု လူသိများသော ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ၁၆ ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သော မင်ဒါနိုကျွန်းစုမှ ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်လာသူ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အာဏာရပါတီဖြစ်သော ပီဒီပီ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လက နိုင်ငံတော်အာဏာ ရယူချိန်တွင် အသက် ၇၁ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ သမ္မတဟောင်းဖြစ်သည့် ဆာဂျီယိုအိုစမန်နာမှာ သမ္မတဖြစ်စဉ်က ၆၅ နှစ်သာရှိသေး၍ ဒူတာတေးမှာ သမိုင်းတွင် အသက်အကြီးဆုံးသမ္မတ ဖြစ်လာသည်။နိုင်ငံရေးမျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက တွေ့ရသော ရော်ဒရီဂို ဒူတာတေး
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ၁၆ ယောက်မြောက် သမ္မတ
၃၀ ဇွန် ၂၀၁၆
၃၀ ဇွန် ၂၀၁၃ – ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၆
၃၀ ဇွနမ ၂၀၀၁ – ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၀
၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၈၈ – ၁၉ မတ် ၁၉၈၈
Dominador Zuño (ယာယီ)
၃၀ ဇွန် ၂၀၁၀ – ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၃
၂ မေ ၁၉၈၆ – ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၇
လာဗိုမြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁၏ အောက်လွှတ်တော်အမတ်
၃၀ ဇွန် ၁၉၈၈ – ၃၀ ဇွန် ၂၀၀၁
(1945-03-28) မတ် ၂၈၊ ၁၉၄၅ (အသက် ၇၆)
ကပါတန် မာကာဘန်ယန် (၁၉၇၀ကာလများ)
Laban ng Makabayang Masang Pilipino (၁၉၉၈-၂၀၀၁)
Hugpong sa Tawong Lungsod (၂၀၁၁-လက်ရှိ)
အဲလိဇဘတ် ဇင်မာမဲ (m. 1973; ann. 2000)
၄ (ပေါ်လို ဒူတာဒေးနှင့် ဆာရာ ဒူတာတေးတို့ အပါအဝင်)
လိုင်စီယမ်တက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရပ်ကို သင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၇၂ တွင် ဆမ်ဘီဒါကောလိပ်မှ ဥပဒေပညာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ရှေ့နေတစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ မင်ဒါနိုကျွန်းပေါ်ရှိ လူနေထူထပ်လှသော ဒါဗိုမြို့၏ တရားထိန်းတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တွင် ၁၉၈၆ တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ဒါဗိုမြို့၏ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဒါဗိုမြို့တော်ဝန်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဒူတာဒေးမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမိုင်းတွင် မြို့တော်ဝန်တာဝန်ကို အများဆုံးထမ်းဆောင်သူ ဖြစ်ကာ သက်တမ်း ၇ ကြိမ်ကို ပေါင်းလိုက်လျှင် ၂၂ နှစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နာမည်ကျော်သူအဖြစ် အကြိမ်များစွာ ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ ဒူတာဒေး၏ မူဝါဒများ အောင်မြင်လာခြင်းမှာ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၆ အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်း မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများကို နှိမ်နင်းရာတွင် ပြတ်သားသော ပြောဆိုမှုများလည်း ပါဝင်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ၏ ထုံးစံအတိုင်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြောဆိုမှုများကို ပြင်းထန်၊ ပြတ်သားစွာ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသတ်ဖြတ်သောသူများတွင် မူးယစ်ဆေးစွဲနေသောသူများ၊ ဆေးမှုခင်းများ၊ အိမ်ယာမဲ့ကလေးများ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဒူတာဒေးမှာ ၂၀၁၆ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပြိုင်ဘက် ၄ ယောက်ဖြစ်သော မာရို့ဆက် (လက်ဘရယ်ပါတီ) (၂၃.၄%)၊ အမတ် ဂရေ့ပိုး (၂၁.၆%)၊ ဂျေဂျီမာ ဘင်နီ (၁၂.၉%)၊ အမတ်ဟောင်း မယ်ရီယမ်ဒယ်ဖယ်ဆာ ဆန်တီကို (၃%)တို့ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ၃၉.၀၁% ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။သူ၏ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ရန်နှင့် ပြစ်မှုများကို ခြောက်လအတွင်း အဆုံးသတ်ရန် ကတိပေးခဲ့သည်။သူ၏ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမူဝါဒများသည် ဖိလစ်ပိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ပွဲမှ စတင်ခဲ့သော ဆေးဝါးအမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်းများအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သေဆုံးသူ ၇၀၀၀ ရှိလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် အချက်အလက်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ သူ၏လက်ထက်တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်ခဲ့ သကဲ့သို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက် အိုဘားမားနှင့်လည်း အခြေတင် ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့ကာ ဘာရက်အိုဘားမားအား ညစ်ညမ်းစွာ ပြန်လည်ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒူတာတေးသည် ၂၀၂၂​ရွေး​ကောက်ပွဲတွင် ဒုတိယသမ္မတ​နေရာအတွက် အ​ရွေးခံမည်ဟု သတင်းထွက်ခဲ့​သော်လည်း အောက်တိုဘာလတွင် ဒုသမ္မတရာထူးအတွက် အရွေးခံမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးလောကမှအနားယူမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
၁ အစောပိုင်းဘဝနှင့် မိသားစု
၂ ဒါဗိုမြို့ မြို့တော်ဝန်
၂.၁ ဥပဒေ အမိန့်များ
၂.၂ ဒါဗို လူသတ်တပ်ဖွဲ့
၂.၃ ဖက်ဒရယ် ထောက်ခံအားပေးမှု
၃ ၂၀၁၆ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ
၃.၁ အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲရေး
၃.၂ မုဒိမ်းမှုအတွက် မှတ်ချက်
၃.၄ သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရခြင်း
၄ ၁၆ယောက်မြောက် သမ္မတ
၄.၁ ပြည်တွင်းရေး မူဝါဒ
၄.၁.၁ မူးယစ်ဆေး ပပျောက်ရေး စီမံချက်
၄.၁.၂ မင်ဒါနို သောင်းကျန်းမှု
၄.၂ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ
၄.၂.၁ တရုတ်နှင့် ရုရှား
ဒူတာဒေးကို ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မာဆင်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ အမေဘက်မှအဘိုးမှာ တရုတ်အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည်။ အဖေဖြစ်သူ ဗင်းဆင့် ဒူတာဒေး (၁၉၁၁-၁၉၆၈)မှာ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမေဖြစ်သူ စောလဒတ် ဒူတာဒေး (၁၉၁၆-၂၀၁၂) မှာ ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ဒူတာဒေး၏ ဖခင်မှာ ယခင်က ဒါနိုမြို့ဝန်ဖြစ်ကာ နောက်ပိုင်းတွင် ဒါဗိုပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်လာသည်။ ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ ရိုနယ်မှာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အထိ ဆီဘူးမြို့ဝန် အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ရိုနယ်၏ အဖေ ရာမွန် ဒူတာဒေးမှာလည်း ဆီဘူးမြို့ဝန်အဖြစ် ၁၉၅၇ မှ ၁၉၅၉ အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒူတာဒေးမျိုးနွယ်များမှာ နိုင်ငံရေးမိသားစုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ သမ္မတ ဒူတာဒေး၏ မိသားစုမှာ မာဆင်မြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒူတာဒေး အသက် ၄ နှစ်အရွယ်အထိ သူ့ဖခင်၏ ဇာတိဖြစ်သော ဒါနိုမြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။၁၉၅၀ တွင် ဒါဗိုဒေသ၌ အခြေချခဲ့သည်။ သူ၏ အမေဖြစ်သူမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နိုင်ငံရေးလောကထဲသို့ မဝင်မီ ၁၉၅၂ ခုနှစ်အထိ ကျောင်းဆရာမအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
မာဆင်မြို့ရှိ လဘွန် မူလတန်းကျောင်းတွင် တစ်နှစ်အကြာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသော မူလတန်းကျောင်းသားဘဝကို ဒါဗိုမြို့ရှိ ဆန်တာအန်နာကျောင်းတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ တွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မနီလာရှိ လိုင်စီယမ်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဖြင့် ဘီအေဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ တွင် ဆမ်ဘီတာကောလိပ်မှ ဥပဒေဒီဂရီ ရရှိပြန်သည်။ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အတွင်း ဒါဗိုအကြံပေးရုံးတွင် အကြံပေးဖြစ်လာသည်။ ၁၉၇၉ မှ ၁၉၈၁ အထိ စတုတ္ထအဆင့် လက်ထောက်တရားထိန်း၊ ၁၉၈၁ မှ ၁၉၈၃ အတွင်း တတိယအဆင့် လက်ထောက်တရားထိန်း၊ ၁၉၈၃ မှ ၁၉၈၆ အတွင်း ဒုတိယအဆင့် လက်ထောက်တရားထိန်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန် ဒူတာဒေးနှင့် သမ္မတ အကွီနို
၁၉၈၆ လူထုတော်လှန်ရေးအပြီးတွင် သမ္မတမစ္စ အကွီနိုက ဒူတာဒေးကို တာဝန်ခံမြို့တော်ဝန် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြို့တော်ဝန် အဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဗိုမြို့တော်ဝန်အဖြစ် ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဒါဗိုမြို့ဝန်အဖြစ် ပြန်လည်အရွေးကောက်ခံကာ သူ၏လေးကြိမ်မြောက် သက်တမ်းကို တာဝန်ယူခဲ့ပြန်သည်။ ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၀၇ တွင်လည်း ပြန်လည်အရွေးခံရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ယိုလန်ဒါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအတွက် ဒါဗိုမြို့မှ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ဆေးဝါးတပ်ဖွဲ့များကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘိုဟိုးနှင့် ဆီဘူးမြို့များ ငလျင်အတွက်လည်း ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ ပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ဇွန်လက ဒုတိယမြို့တော်ဝန် အသစ်ဖြစ်သော ဒူတာဒေးမှ သူ၏ နှုတ်ခွန်းဆက်မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေစဉ်
၂၀၁၀ တွင် မြို့တော်ဝန်နေရာမှ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်နေရာတွင် အရွေးကောက်ခံပြီး ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာသည်။ ယခင် ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဖြစ်သော သမီးဖြစ်သူ ဆာရာဒူတာဒေးမှာ မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသည်။ သမ္မတများဖြစ်ကြသည့် ရာမို့, ဂျိုးဇက်, ဂလိုရီယာ and en:Benigno S. Aquino IIIအကွီနို တို့မှ ဒူတာဒေးအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသော်လည်း အားလုံးကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ရဲသတင်းအချက်အလက်များအရ ဒါဗိုမြို့မှာ လူသတ်မှု အမြင့်မားဆုံး၊ မုဒိမ်းမှု ဒုတိယ အမြင့်မားဆုံး မြို့ဖြစ်ကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စတုတ္ထမြောက် အများဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဒူတာဒေးက သူ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးကို ပံ့ပိုးရန် နိုင်ငံမီဒီယာများတွင် ဒါဗိုမြို့မှာ ကမ္ဘ့ာအလုံခြုံဆုံးမြို့ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းမှာ တရားမဝင်ပေ။ ဒါဗိုမြို့တွင်မူ မြို့၏ထုံးစံအရ ပြည့်တန်ဆာများတွင် ကျန်းမာရေးကတ်ရှိကာ ရဲများက မဖမ်းဆီးပေ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင် ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဖော်ပြချက်အရ ဒါဗိုမြို့မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် သက်ငယ်မုဒိမ်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေရေးအတွက် ထိပ်တန်း ၅ နေရာထဲမှ တစ်နေရာဖြစ်သည်။ ဒူတာဒေး၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် မြို့တော်ကောင်စီမှာ ကျင့်ထုံးအမှတ် ၁၆၂၇ ကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အရက်နှင့် အဖျော်ယာမကာများကို ည ၁ နာရီမှ နံနက် ၈ နာရီအတွင်း ရောင်းချခြင်းကို စည်းကျပ်ထားသည်။ ဒူတာဒေး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အမိန့်အမှတ် ၃၉ အရ မြို့နယ်နိမိတ်အတွင်း ယာဉ်များ၏ အမြန်နှုန်းကို လျော့ချခဲ့သည်။
ဒါဗိုမြို့အစိုးရ၏ နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ ၉-၁-၁ အရေးပေါ်အတွက် လူနာတင်ယာဉ် နောက်ထပ် ၁၀ စီးနှင့် ရဲများအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ် များ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အာရှဒေသတွင် ၉-၁-၁ အရေးပေါ်ဖုန်းကို အလကားခေါ်ဆိုနိုင်သည့် ပထမဆုံးနှင့် တစ်ခုထဲသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒေသတွင်းအကောင်းဆုံးအစိုးရဆုကို ဒါဗိုမြို့အား ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နဝမမြောက် အလုံခြုံဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးမြို့တော်တွေကြားထဲက အဲဒီဂုဏ်ပုဒ်ကို ဘယ်လိုရလာတယ်ထင်လို့လဲ။ ရာဇဝတ်ကောင်အားလုံးကို သတ်ပါ။
—ဒူတာတေး၊ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၅
တိုင်းမဂ္ဂဇင်းက အပြစ်ပေးသမားဟု အမည်ပေးထားသော ဒူတာဒေးကို ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက အမှုပေါင်းစုံမှ လူ ၁၄၀၀ ကို လူသတ်တပ်ဖွဲ့ဖြင့် ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီတွင် ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးညီလာခံ၌ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာအရ ဒါဗိုမြို့ဝန်မှာ ဤလူသတ်မှုများအတွက် တားဆီးခြင်းမရှိကြောင်း၊ သူ၏ ပြောကြားချက်များမှာလည်း ဤလူသတ်မှုကို အားပေးနေသည်ဟု ပါရှိသည်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်သူများ၏ ၂၀၀၁-၂၀၀၂အစီရင်ခံစာတွင် ဒူတာဒေးမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ပြည်တွင်းရုပ်သံ၊ ရေဒီယိုများမှ ဖော်ပြခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့အား ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း ပါရှိသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မနီလာဟိုတယ်၌ ကျင်းပသော မှုခင်းညီလာခံတွင် ဒူတာဒေးက တရားခံများကို သတ်ခြင်းက ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့် တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးအတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ 
နိုင်ငံတကာက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြသည့် ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်မှုအတွက် တာဝန်ယူရမည်ဟု ပြောကြားချက်များအား ဒူတာဒေးက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ထိုသို့သတ်ဖြတ်ခြင်းများအတွက် သူ၏ ထောက်ခံမှုကို လည်း မကြာခဏ ထုတ်ဖော်ပြောလေ့ရှိသည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနအရ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုနီးပါးကြာအောင် ဆေးသုံးစွဲသူများနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမှာ ၎င်းအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုရုံးသို့ တက်ရနိုင်စေသည်ဟု ဆိုသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဒူတာဒေးက သူမြို့တော်ဝန်ဖြစ်နေချိန်တွင် သူ၏မြို့၌ တရားမဝင်လုပ်ငန်းများ၊ အပြစ်မဲ့သူများအား နှောက်ယှက်ခြင်းများမှာ ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ တွင် သူ၏ ဒါဗိုမြို့တွင် ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းများကို ပြောဆိုခဲ့ပြီး သူသမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရပါက တရားခံ ၁၀၀၀၀၀ ခန့် သတ်ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း စိုးရိမ်ကြသည်။ ထိုသို့ပြောကြားအပြီး သူက လူ့အခွင့်အရေးအရာရှိများကို သူနှင့်ပက်သက်၍ သက်သေများရှိပါက ဖိုင်တွဲထားရန် ပြောခဲ့ပြန်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မင်ဒါနိုကောင်စီ၏ အကြီးအကဲများအဖြစ် ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ကြသော ဒူတာဒေးအပါအဝင် ယခင်မြို့တော်ဝန်များ၊ အုပ်ချုပ်သူများက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်လအကြာတွင် ဆီဘူးမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ဖိလစ်ပိုင်တွင် ဖက်ဒရယ်စနစ် လှုပ်ရှားမှုမှ ထောက်ပံ့သော ပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဒူတာဒေးက Mindanawons Forging Unity TowardaFederal System of Governmentအမည်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။
၂၀၁၆ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်
၂၀၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ အမှတ်တံဆိပ်
၂၀၁၅ အစောပိုင်းက ဒူတာဒေးက သူ့အနေဖြင့် ၂၀၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ရန် အကြံအစည်အား မီဒီယာများအား အရိပ်အမြွက်ပြသည်။ သို့သော် သူ့အားထောက်ခံသူများထံမှ မြောက်များလှသော ဆူညံမှုများကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီတွင် သူက သမ္မတအဖြစ် အရွေးခံရပါက ကွန်ဂရက်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ပြောခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ဆမ်ဘီတာကောလိပ် တွေ့ဆုံပွဲ၌ ဒူတာဒေးက ၂၀၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် တရားဝင်ကြေညာခဲ့ကာ သူ၏မြို့တော်ဝန်နေရာကို သမီးဖြစ်သူ ဆာရာဒူတာဒေးအား အစားထိုးရန်ပြောခဲ့သည်။ သူ၏ မဲဆွယ်ပွဲတွင် ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်စနစ်ကို မိတ်ဆက်နိုင်ရန် ပြောခဲ့သည်။ ၆ လအတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သောင်းချီကို သတ်နိုင်ရန်လည်း ကတိပေးခဲ့သည်။
ဒူတာဒေးက ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ကူးပြောင်းရေးအတွက် အဓိကထား မဲဆွယ်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်က မာကာတီစီးပွားရေးစကားဝိုင်း၌ ဒူတာဒေးက ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများလာရန် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ပြောခဲ့သည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီ ၁၂ရက်နေ့ကကျင်းပသောပွဲ၌ မြို့တော်ဝန်ဒူတာဒေးက သူ၏ထောက်ခံသူများကို မုဒိမ်းမှုလျှော့ချရန် ပြောခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သမီးဖြစ်သူ ဆာရာဒူတာဒေးက လူမှုကွန်ယက်မှနေ၍ သူမှာ မုဒိမ်းမှု၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း သူ့အဖေကို ထောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် လုပ်သော စီးပွားရေးမဲဆွယ်ပွဲတွင် ဒူတာဒေးက သူ၏သမ္မတရာထူးမှာ သွေးစွန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၁၆ ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်က ဒူတာဒေးကို သမ္မတအဖြစ်တင်မြှောက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ မဲရေတွက်မှုအရ ၁၆,၆၀၁,၉၉၇မဲဖြင့် ဒုတိယမဲအများဆုံးဖြစ်သူ မာရိုးဆတ်အား ၆.၆မီလီယံ ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရော်ဒရီဂို ဒူတာတေး၏ သမ္မတသက်တမ်းမှာ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အသက်၇၁နှစ်အရွယ် ဒူတာဒေးမှာ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမိုင်းတွင် အသက်အကြီးဆုံးသမ္မတဖြစ်သည်။
သမ္မတဟောင်း အကွီနို(၃)နှင့် သမ္မတသစ် ရော်ဒရီဂို ဒူတာတေး
စစ်တမ်းအရ ဒူတာဒေးမှာ သမ္မတဟောင်း ဖာဒီနန်မားကို့စ်မှစ၍ သမ္မတ၆ယောက်အတွင်း ယုံကြည်ခံရမှုအမြင့်ဆုံးအဖြစ် ၉၁%ဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။ (ယခင်က သမ္မတဟောင်းအကွီနို(၃)က ၈၉%ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်တော့ သူ၏ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၈၁% ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဇွန် ၃၀ ရက် အာဏာရယူအပြီး ဒူတာဒေးက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးစီမံချက်၊ နိုင်ငံအဓိက ဝင်ပေါက်ဖြစ်သော အကွီနိုလေဆိပ် စီမံကိန်း၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားမှုများ အပါအဝင် သူတို့အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များအတွက် ပထမဆုံးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ခေါ်ယူခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ က ဗီယက်နမ်ခရီးစဉ်တွင် ပြည်ပရောက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများအား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်စဉ်
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ၂၄ နာရီ တိုင်ကြားစာလက်ခံရေး ဟော့လိုင်းဖုန်း ၈၈၈၈ ကို ကြေညာကာ နိုင်ငံ၏ အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ကို ၁-၁-၇ မှ ဒါဗိုမြို့တွင် ပထမဆုံး သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ၉-၁-၁သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဩဂုတ် ၇ ရက်နေ့တွင် ဒူတာဒေးက သမ္မတဟောင်း ဖာဒီနန်မားကို့စ်၏ အုတ်ဂူကို သူရဲကောင်းဗိမ္မာန်သို့ ပြောင်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။ မားကို့စ်မှာ သူ၏ သမ္မတနှင့်စစ်သား အရည်အချင်းများကြောင့် ထိုနေရာတွင် မြှပ်နှံရန် ပြည့်စုံကြောင်းဆိုသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ဒါဗိုမြို့ ဗုံးကွဲမှုတွင် လူ ၁၄ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလတွင် Forbesမဂ္ဂဇင်း၏ ကမ္ဘာ့အာဏာအရှိဆုံးလူစာရင်းတွင် ဒူတာဒေးက အဆင့် ၇၀ ရှိခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ဒူတာဒေးက ၁၉၈၇ အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မေ ၁၆ ၂၀၁၇ တွင် အများဆိုင်နေရာများ၌ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ရန် တွန်းအားပေး လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေး ပပျောက်ရေး စီမံချက်ပြင်ဆင်
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုအပြီးတွင် ဒူတာဒေးက တွန်ဒိုတွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းတွင် ဆေးစွဲနေသူများအား သတ်ပစ်ရန် ပြည်သူများကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ပါတီသစ်ဟု သိကြသော ကွန်မြူနစ်သူပုန်များကိုလည်း ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများမှနေ၍ ဆေးစွဲသူများအားသတ်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၇ ရက်က ကျင်းပသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒူတာဒေးက တရုတ်နိုင်ငံသား မူးယစ်ဘုရင် ၃ ယောက်နှင့် ပက်သက်သည့် ဇယားတစ်ခုကို ပြသခဲ့သည်။
ဒူတာဒေး၏ နိုင်ငံတကာ တရားဝင် ခရီးစဉ်များ
ဒူတာဒေး၏ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် မည်သည့် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လက်မခံကြောင်း ကတိပြုခဲ့သည်။ ဒူတာဒေး၏ ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များအဖြစ် စက်တင်ဘာ ၅-၉ အထိ ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများအား သွားရောက်ခဲ့သည်။ 
သူ၏ သမ္မတရာထူး ရယူအပြီးတွင် တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့နှင့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာတွင် ဒူတာဒေးက တရုတ်နှင့် ရုရှားမှ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒူတာဒေးနှင့် သမ္မတ ရှီကျင့်ပင်
၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၈-၂၁ တွင် ဒူတာဒေးက တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင် အရာရှိများနှင့် ဘေကျင်းမြို့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀ တွင် ဒူတာဒေးက ပီရူးနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော အေးပက် အစည်းအဝေးအတွင်း ရုရှားသမ္မတ ပူတင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒူတာဒေးက ပူတင်၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ချီးကျူးထောပနာ ပြုခဲ့ကာ idolဟုပင် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ဒူတာဒေးကို ရုရှားနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန်လည်း ပူတင်က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဒူတာဒေးက ဖိလစ်ပိုင်-ရုရှား ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းမှု စာချုပ် အပြီးသတ်နိုင်မည့် ၂၀၁၇ မေ ၂၅ တွင် ရုရှားနိုင်ငံသို့ လာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဒူတာဒေးက သူမှာ အမေရိကန်၏ ပရိသတ်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်ဒါနိုရှိ အမေရိကန်စစ်တပ်ကို ပြန်ကြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၇ တွင် ဒူတာဒေးက သူ၏အုပ်ချုပ်မှုတွင် အမေရိကန်၏ လွှမ်းမိုးမှုကို လက်မခံကြောင်း ကတိပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်အစိုးရ၏ သူ၏မူးယစ်နှိမ်နှင်းမှုအပေါ် ပြောကြားချက်များကိုလည်း ဝေဖန်ခဲ့သည်။
ဒူတာဒေးက ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဆက်ဆံရေးကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထုံးစံအရ သူ၏ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များအဖြစ် အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဘရူနိုင်းနှင့် စင်ကာပူသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို သမ္မတ ဦးထင်ကျော် လက်ထက်က လာရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မနီလာတွင် ၃၁ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာလ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ဒူတာဒေးမှာ ခရူဆာဆိုင်ကယ်များကို အလွန်နှစ်သက်သူဖြစ်ကာ ဇိမ်ခံကားများကိုတော့ မနှစ်သက်ပေ။
ဒူတာဒေးမှာ အဲလိစဘတ်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ကလေး၃ယောက် ဖွားမြင်သည်။ ပေါ်လို ("Pulong"), ဆာရာ ("Inday Sara")နှင့် ဆီဘာစတန်တို့ဖြစ်သည်။ ပေါ်လိုနှင့် ဆာရာမှာ နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
↑ Punzalan၊ Jamaine။ "Duterte eyeing revolutionary gov't with Joma Sison: Trillanes"၊ ABS-CBN News၊ May 3, 2016။
↑ Flores, W.L. (June 19, 2016)။ President-elect Rody Duterte as dad & memories of his own father။ The Philippine Star။
↑ "Sergio Osmeña | president of Philippines"။ Encyclopædia Britannica။ June 3, 2011။ April 6, 2017 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Philippine death squads very much in business as Duterte set for presidency"၊ Reuters၊ May 26, 2016။
↑ Results of the 2016 Presidential elections။
↑ "Kill drug dealers and I'll give youamedal, says Philippines president"၊ The Guardian၊5June 2016။
↑ "Philippines President Rodrigo Duterte to stand as vice-president"။
↑ "Duterte says he is retiring from politics and won't run for VP"။
↑ About President Duterte။ July 8, 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Rody Duterte owes his political career to Cory Aquino"၊ Philippine Daily Inquirer၊ June 5, 2016။
↑ "Thousands dead: the Philippine president, the death squad allegations andabrutal drugs war"၊ The Guardian၊ April 2, 2017။
↑ Ocampo, Y.D. (August 5, 2016)။ Davao's Central 911 serves as model for national counterpart။ Manila Bulletin။[လင့်ခ်သေ]
↑ "Rodrigo Duterte: The Rise of Philippines’ Death Squad Mayor"၊ Human Rights Watch၊ July 17, 2015။ Archived from the original on September 1, 2016။
↑ "We must stand against the death squads"၊ The Manila Times၊ May 7, 2006။
↑ Dioquino၊ Rose-An Jessica။ "Duterte files COC for president"၊ GMA Network၊ November 27, 2015။
↑ "The Truth About Duterte’s ‘Popularity’ in the Philippines"၊ The Diplomat၊ October 7, 2016။
↑ "Duterte heads to Laos for ASEAN summit"၊ CNN Philippines၊ September 5, 2016။
↑ "LIST: World leaders attending ASEAN 2017 in the Philippines"။
↑ "Duterte conferred with highest Knights of Rizal award"။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရော်ဒရီဂို_ဒူတာတေး&oldid=704420" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။